Hembe dzeVacheche, Vana Mucheka, Teenager Colth - JiaTian
Yakashongedzwa gwayana feather jasi
Pink tulle siketi
Snowflake inosuka yako jekete yejini
Yakasununguka machira, akapfava uye akasununguka kunzwa, kugona kwakanyanya, kusununguka kupfeka inodziya.
Mucheka wakareruka, wakapfava, wakasviba uye haugumbure ganda.
Rega vatengi vanzwe kusununguka nezvigadzirwa zvavanoshandisa
ona zvakadzama kuvimbiswa kwemhando yepamusoro
Hebei JiaTian Import & Export Co, Ltd., yakavambwa muna 2002, uye yakavakirwa muShijiazhuang guta, Hebei dunhu, yaiita zvipfeko zvekutengesa kunze kweanopfuura makore gumi. Yakave yakasimbiswa kwenguva refu bhizinesi kubata neEurope, South Africa nedzimwe nzvimbo uye zvigadzirwa kunyanya vacheche uye zvipfeko zvevana. kubvira payakatangwa, kambani yedu inonamatira kuchimiro che "kutendeseka uye kuvimbika" kutanga, zvinoshanda uye zvitsva, takamira nemitemo iyi, isu tinosimbisa kubatana uye kubatana nevatengi.
Zhang Qinghui, sachigaro weChina Fashoni Vagadziri Association, akaturikira zvakakosha zvevhiki ino yemafashoni, "iri fashoni svondo rinofukidza kupfeka kwevakadzi, kupfeka kwevarume, madhirezi emuchato, marokwe, shangu, mabhegi, nezvimwe. Sechikwata chekupfeka nekukurumidza kusimudzira musika, kukuru zvinogona ...
Mushandi ane makore mashanu okuberekwa Alice Jacob ari kudzidza ...
Mumiriri wemakore mashanu muratidziri Alice Jacob ari kudzidza achiri mudiki kuti kumira pane zvaunotenda kunogona kuita musiyano. Jacob akatanga kuzviitira zita pakutanga kwemwedzi uno, apo Washington Post yakaburitsa tsamba yaakanyora kuna Gap CEO Jeff Kirwan, achikumbira mari shoma ...